Ballet TUTU siketi inogona kuratidza mafambiro emutambi - Nhau - Shenzhen Wudongfang Culture Communication Co., Ltd.
Imba > Nhau > Nhau dzekambani > Ballet TUTU siketi inogona kuratidza mafambiro emutambi
Ballet TUTU siketi inogona kuratidza mafambiro emutambi
Ballet Tutusiketi ndiyo inonyanya kuoneka siketi yekutamba mune yechinyakare ballet. Inoratidzirwa nesiketi pfupi kwazvo, iyo yakatambanudzwa kubva muchiuno kuti zviite nyore kune vateereri kukoshesa kufamba kwetsoka kwemutambi uye chimiro chavo chegumbo. Mumutambo weLake, Tutu akapotsa asundidzirwa kumusoro. Gare gare, apo vanhu vaitaura nezve ballet, ivo vaitaridza mutambi sekupfeka Tutu uye pointe shangu, zvinoratidza kubudirira kwayo.
Tutu akagadzirwa neshinda yakakosha, iyo yakakamurwa kuva Tutu yekudzidzira uye Tutu yekuita. Musiyano uripo pakati pezviviri uyu unonyanya kuve huwandu hweshinda. Iyo yekutanga inonyanya kushandiswa pakuita, saka iyo yakapfava yakapfava, asi iyo yekupedzisira inowanzo Ratidza hukadzi hwemukadzi kana nyasha, uye kazhinji inoshandisa anopfuura matanhatu matete ewuru, ayo anoita kunge akapfava, pane kuomarara se Tutu.
Uye zvakare, Tutu anowanzo kuve neinowirirana yepamusoro yakanangana neTutu, nepo Tutu anowanzo kuve akaparadzana siketi yekutamba. Pasina inoenderana yepamusoro, inogona kungoenderana nesutu yekudzidzira. Kana ari Tutu nebhurugwa remukati. Une kana usina bhurugwa (Tutu chipfeko chemukati chakabatana), nekuda kweyekufananidza mbatya dzekurovedza muviri, hapana musiyano wakakosha pakati pezviviri, ingori nyaya yesarudzo yemunhu.
Yakasimbiswa muna 1999ï¼ŒWudongfang Tsika Yekutakura Co., Ltd. uyo anonyanya kugadzirwa, kugadzirwa uye kutengesa kwekutamba kupfeka, uye ane mukurumbira wepamusoro muChinese yekutamba juear indasitiri. Zvigadzirwa zvedu zvikuru zvinosanganisira ballet tutu, masiketi e ballet, leotard yekutamba uye zvimwe zvipfeko. Uye shangu dze ballet, tights dze ballet uye zvimwe zvishongedzo.
Yapfuura:Ballet tutu zvipfeko zvakajairwa
Tevere:Kukuudza basa rezvipfeko zve ballet